गर्भवती भए-नभएको कुरा घरमै जाँच्न सकिँदैन ? - स्वास्थ्य - साप्ताहिक
म १९ वर्षीया अविवाहित युवती हुँ । केही अघिदेखि नै महिना-दुई महिनामा एक-दुई पटक मेरो एकजना केटा साथीसँग यौनसम्पर्क हुने गरेको थियो । हामीले परिवार नियोजनका कुनै साधन प्रयोग गरेका थिएनौं, तर वीर्य बाहिर फ्याँक्ने गरेका थियौं । गत महिना मैले महिनावारी रोक्ने औषधि प्रयोग गरेको थिएँ, त्यही बेला हामीबीच सम्पर्क भयो र भोलिपल्टै महिनावारी भयो ।
तै पनि मैले थप २ दिन औषधि प्रयोग गरें । यो महिना मेरो महिनावारी भएको छैन । कतै म गर्भवती त भइनँ ? गर्भवती भए-नभएको कुरा घरमै जाँच्न सकिँदैन ? महिनावारी भएका बेला यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहन्छ कि रहँदैन ?